Moscow ga-akwụsị iji sọftụwia Microsoft | Akụkọ akụrụngwa
Companylọ ọrụ ndị Redmond nwere ike ịkwụsị ijere isi obodo Russia ozi. Dabere na Bloomberg, Moscow ga-amalite iji dochie ngwaahịa Microsoft na sọftụwia mba, n'ihi mbọ Vladimir Putin siri ike ịkwụsị ịdabere na teknụzụ mba ofesi, ọ pụrụ iche na ihe niile si na United States. Onye isi ihe nka nka bu Artem Yermolaev gwara ndi nta akuko na ọrụ izizi ịkwụsị ịrụ ọrụ ga-abụ Microsoft Exchange na Outlook, nke a ga-edochi na kọmputa 6.000 site na ngwanrọ sitere na ụlọ ọrụ Russia Rostelecom.
Mana nke a bụ naanị isi mmiri, ebe ọ bụ na n'ọdịnihu, ndị ọchịchị chọrọ itinye usoro sọftụwia mba iji jikwaa ozi-e na ihe karịrị komputa 600.000 kesara mba ahụ dum. Ha nwedịrị ike dochie Windows na Office ọ bụ ezie n'oge ahụ, dị ka ọkwa nke onye ozi teknụzụ si kwuo, enweghị atụmatụ na nke a.
Onye isi ala Russia Vladimir Putin na-arịọ ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ ka ha nye ya ohere nke ga-enye ha ohere ịrụ ọrụ dịka ha mere na mbụ ma kwụsị ịdabere na ngwanrọ America. Enweghị obi ike na ngwanrọ America ọ bụghị naanị na-emetụta Microsoft kamakwa Google na Apple Ha nwere nsogbu dị iche iche na mba ahụ n'ihi ebubo nyocha nke ngwa ha na sistemụ arụmọrụ.
Ọ malitere na Crimea nsogbu, nke mba ụwa gbara ọsọ megide Russia, na egwu mbụ malitere ịbịakwute Russia na Europe na United States. Iji gbalịa ịkwụsị ọganihu nke ngwaahịa ndị America na mba ahụ, Putin chọrọ ịbawanye ụtụ na ụlọ ọrụ America nke na-arụ ọrụ n'ime mba ahụ.
Nke nta nke nta, gọọmentị Russia yiri ka ọ na-agbaso nzọụkwụ China, na-anwa achịkwala oge niile ozi na-ekesa na ịntanetị na ngwaọrụ ndị nwere ike iburu gọọmentị egwu. Ekwesiri icheta na afọ ole na ole gara aga, gọọmentị mba ahụ kpebiri iji dochie mbadamba iPad niile na mbadamba Samsung, ebe ha kwuru na iOS nwere ọnụ ụzọ azụ nke mere ka ndị ọchịchị America nweta ozi echekwara na ngwaọrụ ọ bụla.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Kọmputa » Moscow ga-akwụsị iji sọftụwia Microsoft
Bọchị ire ere na Europe nke Samsung Galaxy Note 7 bụ October 28